Tonizia: Fanokafana Ireo Fonja Amin’izao Tontolo Izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 7:51 GMT
Ato anatin'ity vohikala ity, miezaka mampiseho ireo lahatsary ahitana na miresaka mikasika ireo fanitsakitsahana zon'olombelona aho, ary – araka izay ao anatin'ny lahatsary Toniziana eo ambony – ny vokatr'ireo fanitsakitsahana zon'olombelona atao amin'ireo olona tsotra. Tsy miteny Arabo aho, noho izany ahoana no hahalalako izay lazain'ity lahatsary ity?
Misaotra an'i Sami Ben Gharbia, Toniziana mpikatroka, izay tamin'ny Alatsinainy teo, nandefa ny Sarintanin'ireo Toniziana Voafonja, mampiseho ireo fonja itànana gadra politika sy ireo gadra hafa ao Tonizia. Ilay vohikala, izay – mitovy amin'ireo vohikala toy ny ChicagoCrime.org – mampiasa ny fampitambaran'ny Google Maps, dia manome fintina tantara fohy momba ny voafonja tsirairay, ireo rohy mitombina avy ivelany, ary, ny toerana nahitàn'i Sami azy, lahatsary an'ny fianakavian'izy ireo tety anaty aterineto – raha ny momba ilay lahatsary etsy ambony, dia i Mohamed Abbou io. Amin'ny fiteny arabo ireo lahatsary ireo, noho izany tsy afaka manome antsipirihany betsaka ho anao aho (misy afaka manampy ve?), saingy misy fanampim-baovao vitsivitsy amin'ny fiteny Angilisy ao amin'ireo tantaranà tranga natolotr'i Sami.
Sami, izay miaina an-tsesitany ao Holandy, miresaka ao anaty lahatsoratra iray nalefany amin'ny fiteny Frantsay sy Arabo, mikasika ny kolontsaina tsiambaratelo ofisialy manodidina ny fisian'ireny fonja ireny, ireo sakana goavana tsy hahalalana bebe kokoa, ary ireo fiantraikany ho an'ireo izay mangataka fanazavàna amin'ny governemanta. Tsy misy lisitra voafaritra momba ireo fonja sivily ao Tonizia, ary miezaka misava ravina ao anatin'io ny Tunisian Prisoners Map amin'ny alalan'ny fametrahana an-sarintany ireo tranga any amin'ireo fonja efa ho 25 eo ho eo. Azonao jerena amin'ny antsipirihany mahatalanjona ny sasany amin'ireo fonja raha arosonao alohaloha kokoa ny fitaradavitra (zoom), saingy manakaikikaiky ny tena izy avokoa ny ankamaroan'ireo toerana.
Tamin'ny fanehoana hevitra teo amin'ny sarintany ao amin'ny nawaat.org, ilay tranonkala tantanin'i Sami, somary mangotraka kely ny astrubal mikasika ny fihetsik'ireo blaogera momba ilay tranonkala vaovao – lazainy fa tsy nisy filazàna momba ilay tranonkala nanomboka tamin'ny fandefasana azy efa ho andro vitsivitsy izao, ary miantso ny tontolom-bolongana Toniziana ho ‘lobotomisphere’. Ataovy ao an-tsaina fa, araka ireo loharano sasantsasany, vinaniana ho 350 ankehitriny no isan'ireo gadra politika giazan'ny governemanta Toniziana ao amin'ireo fonjan'ny firenena ary misy ireo tatitra tsy tapaka momba ny zon'olombelona mifantoka amin'ny fomba fitondràna sy ny tokony hahasoa an'ireo voafonja. Ny zavatra mety ho eritreretinao no tena lohahevitra lehibe mahalina ho an'ireo Toniziana blaogera, saingy ohatran'ny marina ny an'ny Astrubal – rehefa avy nanamarina fotsiny aho, tsy misy iray tamin'ireo blaogy amin'ny teny Frantsay na Anglisy hitako navory tao amin'iilay mpanangona Blaogy Toniziana voalaza, na nifandrohy tamin'ny tranonkalan'i Sami. Nanontaniako tamin'ny imailaka i Sami ny antony nieritreretany hoe io no tranga nisy:
Tsy manantena mihitsy ny hahita ireo lazaina fa “blaogera Toniziana” aho na ny tontolom-bolongana hiresaka an'io olana io. Ny ankamaroan'izy ireo misafidy ny fanivanantena sy hanapaka hevitra ny tsy hanao adihevitra sy hanoratra politika izay mety hanafintohina ny fitondrana toniziana. Resahan'izy ireo daholo ny zavatra rehetra afa-tsy ireo raharaha an-tokantranon'ny Toniziana. Izay no Zavapady ho an'ny tontolom-bolongana Toniziana. Ankoatra izay, anisan'ireo blaogera voarara aho izay tsy manavotra ny fitondrana Toniziana sy tsy ekena ho toy ny “mpikambana” amin'ny tontolom-bolongana Toniziana. Toy izay nosoratan'i Wael Abass, blaogera sy mpanao gazety ao amin'ny Masoivohom-baovao Deutsche Presse, tamin'ny herinandro lasa teo: “Sami Bin Gharbia, toniziana iray tompon'ny Kitab.nl, no voalahatra ho lasa mpialokaloka, ara-batana sy ara-virtoaly. Monina any Holandy izy ary voasakan'ny mpandrakitra blaogy Toniziana (…) noho izany nialokaloka tao amin'ny mpandrakitra ny blaogy Ejiptiana ampiantranoin'ny Manalaa.net, izy.”
Tsy vitan'ny hoe vosivana izahay ao Tonizia, fa mbola voasivana koa any anatin'ireo mpanangona bilaogy Toniziana ary hatrany amin'ilay “Ako avy any amin'ny Tontolom-bolongana Toniziana izay mivoaka eto amin'ny Global Voices. Tsy ren'izy ireo ny “Ako” avy aminay satria politika ny zavatra soratanay! Tsy hainay izay atahoran-dry zareo hiresaka momba ireny olana ireny, indrindra fa ho an'ireo izay ao Tonizia no monina. Enga anie, mba ho takatr'izy ireo ny ahiahinay hiaro ny maha-olompirenena sy ny zonay? Tsarovy, Tranonkala ity! Ary izahay dia mirotsaka hiaro ity fitaovana tsy manam-paharoa ity tsy hiharan'ny sivana sy ilay mpiaradia aminy misoko mangina: ny fanivanantena.
Araka ny voalazan'i Sami, miaina amin-tahotra ireo maneho hevitra mikasika ny zon'olombelona avy ao Tonizia. Nandritra ny Fihaonamben'Izao Tontolo Izao mikasika ny Vaovaon'ny Fiarahamonina, nanome tatitra iray miavaka mikasika ny fihaonana niaraka tamin'ny Ligy Toniziana Momba ny Zon'Olombelona i Ethan Zuckerman. Mety mbola tsy amin'ny toerana ahafahany mamorona na miady hevitra mikasika tranonkala iray toy ny an'i Sami ireo Toniziana blaogera, saingy araka ny voalazan'ny vohikala iray izay mifandrohy amin'ny Tunisian Prisoners Map, nikitika tao ireo mpampiasa avy amin'ireo Toniziana mpanome tolotra aterineto.
Rehefa miha-mitombo hatrany ny fahafahana miditra amin'ny teknolojia, tsy ho azo sakanana ny karazana tranonkala marobe mitovy amin'io, manangona ireo sarintany, ireo tantaranà tranga, ireo tahirin-kevitra avy aminà fikarohana, ireo fitaovana fisoloana vava, ary, eny, ireo lahatsary, ka dia ho moramora kokoa ny hanandramana mitondra fanazavàna… Ho liana amin'ny fandalinana ireo hetsika erantany mitovitovty amin'io aho, noho izany mifandraisa amiko raha mahafantatra iray ianao.
Eo ampiandrasana izany, lasa andrana goavana hananganana adihevitra ivelan'i Tonizia ny Sarintany Toniziana misy ireo voafonja, mikasika ny toedraharaha misy ny zon'olombelona ao amin'ny firenena, ary mety hanatevina ny tsindry iraisam-pirenena amin'ny filoha Zinedine Ben Ali. Koa satria ireo blaogera Toniziana mety tsy ho afaka hampaneno ny kiririokan'ilay tranonkala any amin'ny blaogin-dry zareo, dia mampifandrohy ny tranonkalan'i Sami miainga avy amin'ireo tranonkala, satria io no manampy azy ireo hiady amin'ny kolontsain'ny tsiambaratelo sy ny tahotra, izay mahatonga azy ireo hangina.